Agromart | Agricultural Marketplace Nepal ब्रोकाउली खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. ब्रोकाउली कुन तरकारी वाली समूहमा पर्दछ ?
Q 2. ब्रोकाउली कस्तो हावापानीमा हुने तरकारी वाली हो ?
Q 3. ब्रोकाउली खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ ?
यसको खेतीको लागि साधारणतया ५.५ देखि ६.६. सम्म पि.एच.मान भएको चिस्यान ग्रहण गर्न सक्ने र पानीको निकास भएको, प्रशस्त प्राँङ्गारिक पदार्थ भएको दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ।
Q 4. ब्रोकाउली खेतीमा मलखाद व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
ब्रोकाउली राम्रो खाद्यतत्वहरु समावेश भएको माटोमा मात्र राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। प्रति रोपनी ५०० के.जी. गोबर/कम्पोष्ट मल, १२ के.जी. नाइट्रोजन, ९ के.जी. फस्फोरस तथा ४ के.जी. पोटास मल दिनु पर्दछ।
Q 5. नेपालमा ब्रोकाउली खेतीका लागि राम्रो र प्रचलित स्थानिय जात कुन हो ?
Q 6. ब्रोकाउलीका अगौटे जातहरु कुन कुन हुन् ?
Q 7. ब्रोकाउलीका मध्यम मौसमी र पछौटे जातहरु कुन कुन हुन् ?
Q 8. ब्रोकाउली खेतीमा वेर्ना जर्खराउने के हो र अगौटे जातका ब्रोकाउलीका वेर्नाहरुलाई जर्खराउने गरिन्न किन?
Q 9. ब्रोकाउलीको वीउ उम्रने वित्तिकै फेद कुहिएर ढल्ने मर्ने गर्दछ किन ? यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 10. वेमौसमी रुपमा खेती गर्न कुन कुन जातहरु उपयुक्त हुन्छन् ?
Q 11. वेमौसमी खेती गर्न कुन कुन कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ?
Q 12. ब्रोकाउली खेतीको नर्सरीका लागि कस्तो जमिनको अवाश्यकता पर्दछ ?
Q 13. ब्रोकाउली खेतीमा गोडमेल र टपड्रेस कसरी गरिन्छ ?
Q 14. ब्रोकाउली खेतीमा सिंचाईका विधि के के छन् र कसरी गरिन्छ ?
Q 15. ब्रोकाउलीको पातमा कीराले जाली कसरी बनाउँछ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नु पर्दछ ?
Q 16. लाही कीरा ब्रोकाउलीको लागि कति हानिकारक छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 17. उफ्रने खपटे कीराहरु कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 18. ब्रोकाउलीको फूल (Curd) लाई ढुवानी गर्दा कसरी वचावट गर्न सकिन्छ ?
काउलीको फूल (Curd) काट्दा माथिल्ला ३–४ वटा पात सहित काट्ने तथा ती पातहरुलाई फूललाई छोपी एक आपसमा जुधाएर प्याकिङ्ग गर्दा ढुवानीको अवस्थामा नोक्सानी हुँदैन।
Q 19. ईट बुट्टे पुतली (Diamond Back Moth) कीरा कसरी चिन्ने ? यसले ब्रोकाउलीलाई कसरी नोक्सानी पुर्याबउँछ र यसको रोकथाम कसरी गरिन्छ ?
यी पुतलीहरुका अघिल्ला पखेटामा त्रिकोणात्मक पहेला दाग हुन्छन्। पुतलीले पखेटा जोडी वस्दा ढाडमा ३ वटा ईटाबुट्टे आकार हुन्छ। लाभ्रेले खाएर पातमा धेरै प्वाल पार्दछन्। सकेसम्म भौतिक एवं जैविक तरीकाले कीराको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ अन्यथा फेनिड्रोथापन वा इन्डोसल्फान ३ मि.लि. प्रति लिटर पानीका दरले स्प्रे गर्नु पर्दछ।
Q 20. ब्रोकाउलीको ग्रेडिङ्ग कसरी गरिन्छ ?
Q 21. ब्रोकाउली ढुवानी गर्दा कुन–कुन कुराहरुमा ध्यान पुर्या्उनु पर्दछ ?
प्रथमतःब्रोकाउली काट्ने वेलामा नै तीन चारवटा माथिल्ला पातहरु सहित काट्नु पर्दछ । ती माथिल्ला पातहरुले ब्रोकाउलीको फूल (Curd) लाई ढाकिने गरी डोरी सुतलीले बाँधि टुप्पो तर्फ जुधाई डोको, डालो, क्रेट आदिमा प्याकिङ्ग गरेर मात्र ढुवानी गर्नु पर्दछ ।
Q 22. ब्रोकाउली कुन वेला काट्न उपयुक्त हुन्छ ?
साधारणतयाब्रोकाउली टिप्न/काट्न समयको ध्यान दिइन्न तर विहान शीत ओभाए पछि र साँझ पख ठण्डा भएपछि टिप्नु पर्दछ। टिपी सकेपछि घाममा नराखी छायाँदार ठाउँमा राख्नु पर्दछ।
Q 23. ब्रोकाउली काट्न तयार भयो भनी कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ?
Q 24. ब्रोकाउली कति तापक्रममा र आर्द्रतामा कति दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ?